Rose & Rose Beauty Land | Myanmar Online Shopping E-commerce Website for Beauty, Cosmetics, Skincare, and Makeup - mm.drecomebeauty.com
Rose & Rose Beauty Land | Ahlon
Rose & Rose Beauty Land
Rose & Rose Beauty Land သည် ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် အလုံမြို့နယ် နှင်းဆီလမ်းနှင့်ငုဝါလမ်းထောင့်တွင် ဖွင့်လှစ်ထားသောဆံကေသာ အလှပြင်ဆိုင်ဖြစ်သည်။ ဆံပင်ကောက်ခြင်း ၊ ဖြောင့်ခြင်း ၊ အရောင်ဆိုးခြင်း များကိုစိတ်တိုင်းကျပြင်ဆင်နိုင်ပါသည်။ ဆံပင်ဆက်ခြင်းကို အဓိကထားဝန်ဆောင်ပေးပြီး ၀န်ထမ်းများ၏၀န်ဆောင်မှုကောင်းမွန်သောကြောင့် ရန်ကုန်မြို၏အကောင်းဆုံးဆိုင်တစ်ဆိုင်ဖြစ်သည်။
No.64, Corner of Hnin Si Street & Ngu War Street, Alone Township.
Rose & Rose Beauty Land was opened since 2007 and which is located at No.64, Corner of Hnin Si Street & Ngu War Street, Alone Township.They offers the various kinds of services such as Hair Cut & Style, Perms & Straightening, Color, Treat & Condition, Hair Extension. The staff also affable , warmly welcome and good serving to the customers. So, it is one of the best beauty salon in yangon.